China NRC rubbering enamathela Abakhiqizi futhi Suppliers | Hongyuan
Umkhiqizo beshintsha ibitume livimbe amanzi angangeni wenza kusukela ibitume iraba Ushintshe kanye izithasiselo ekhethekile ngokusebenzisa inqubo ekhethekile. Kungase kusetshenziswe nezinye ulwelwesi waterproof ukwakha esiyinhlanganisela ungqimba amanzi. Lapho lisetshenziswa njengedivaysi isendlalelo ezimele manzi, ubuso bayo liyakushunyayelwa ivikelwe ukwahlukanisa ungqimba. Imodeli Umkhiqizo and esifakiwe (ziyahlukahluka kusuka izindlela zokwakha): uhlobo sishaye, imidwebo uhlobo, grouting futhi uphawu uhlobo
● Indawo yokuhlala oziphekelayo ukulungiswa: okokusebenza ngeke ukwehlukanisa phakathi ukwakhiwa, okungase yakha ezinzile futhi nekhono ungqimba amanzi. Ungqimba Manzi kabana ukwakhiwa nokusebenza kuyoba self-kwalungisa ukuvikela amanzi abangena ku ungqimba manzi, kanye nokugcina lokuqhubeka ungqimba amanzi. ● adhesion: impahla waterproof kungenziwa banamathela base Yiqiniso ngisho amanzi ukuqinisekisa nomphumela omuhle waterproof lapho ukusonteka kwesakhiwo kwenzeka. ● leaching ukumelana: okokusebenza waterproof ngeke Leach ngesizathu komhlaba ngamanzi ngamanzi emva ukwakhiwa.
● Chemical ukumelana: acid kakhulu, alikhali, nosawoti ukusebenza ukumelana;
● ukwakhiwa Easy: Izidingo ongaphakeme ku isizinda Yiqiniso futhi mahhala kusuka ukwelashwa okukhethekile ukuze unciphise nesikhathi sokwakha, nokwakhiwa ashisa ongaphakeme ovunyelwe;
● yesondlo Easy nokuphathwa
● okuqukethwe okuphezulu okuqinile, futhi akukho izindaba oluyingozi;
● Ungalokothi eqinisa, non-enobuthi, ayinaphunga futhi ohlanzekile;
● Umkhiqizo bulondolozwe yesiqukathi uphawu isikhathi eside, ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza kwayo.
Ububanzi Isicelo NRC non-yokuzigxilisa iraba ibitume enamathela zingasetshenziswa njengendlela yokwelapha isimo waterproof ngoba izakhiwo ezintsha, noma ukulungisa obonakele ungqimba amanzi. Kuyinto kusebenza ungangenisi amanzi izindawo ezivamile, kanye ukusonteka amalunga omzimba kanye nezinye izikhundla ezikhethekile. Uma kuqhathaniswa nezinye izinto zokwakha manzi, it has zinzuzo eziyingqayizivele ekwelashweni waterproof ezikhundleni ezikhethekile.
● Umkhiqizo ingasetshenziswa ukwakha ungqimba manzi, noma ukunamathela ulwelwesi waterproof njenge-glue manzi, ukuze yakha esiyinhlanganisela ungqimba amanzi. ● It has ezinhle ingcina umphumela nazo zonke izinhlobo ulwelwesi waterproof (kuhlanganise EPDM iraba ulwelwesi, polyethylene polypropylene fibre ulwelwesi amanzi), okungase yakha esiyinhlanganisela ungqimba amanzi. ● Ukunamathela base Yiqiniso ukwakha isikhumba-like ungqimba waterproof ukuvimbela wokudlulisela amanzi;
● izidingo okuphansi ku isizinda Yiqiniso nomswakama, nokwakhiwa kungenziwa ngokushesha lapho amanzi ku isizinda Yiqiniso is bahlanza, ukuze unciphise isikhathi ukwakhiwa;
● Inqubo okuhlukahlukene futhi ukwakhiwa elula: umkhiqizo kungenzeka ezidwetshiwe noma wafutha ekwakheni.
● Ezivelele lokushisa ongaphakeme constructability: fafaza ukwakhiwa kungenziwa ngaphansi kwezimo lokushisa ongaphakeme.
● nezimo ePhakeme ukuba ukusonteka kwesakhiwo: okokusebenza has extensibility ezivelele adhesion ukuba kahle ukuzivumelanisa ukusonteka kwesakhiwo, futhi ukugwema umonakalo ungqimba waterproof kubangelwa ukusonteka kwesakhiwo. Lapho ukwakha esiyinhlanganisela ungqimba waterproof nge ulwelwesi, NRC non-yokuzigxilisa iraba ibitume enamathela ukubamba zonke ukucindezeleka ukusonteka ukuze siqinisekise eside intactness ka esiyinhlanganisela ungqimba amanzi.
Composite Ukwakhiwa nge ulwelwesi (Ikani)
Ukushisisa of NRC Non-yokuzigxilisa Rubber ngebitume esinemthombo
Sishaye of NRC Non-yokuzigxilisa Rubber ngebitume esinemthombo
Technical Ukusebenza Inkomba
Executive Standard: Non-yokuzigxilisa Rubber ngebitume (NRC) esinemthombo (Q / 0783WHY003-2012)
Okuqukethwe Solid% ≥
100% Ukwehluleka athishela
Okuphansi lokushisa Ukuvumelana nezimo
-20 ° C, akukho ZaseLaki
-25 ° C, akukho ZaseLaki
Thermal Ukumelana / ° C
Ayikho beya, eligeleza kokuhanjiswa noma ukulandwa othile
Thermal Aging 70 ° C × 168h
-15 ° C, akukho ZaseLaki
IMisa Guqula /%
Creep ngaphansi Wokudiliza State / N / mm
Anti-wokudlulisela Ukusebenza / 0.6MPa
Previous: double ingxenye livimbe amanzi angangeni
Olandelayo: High nokunwebeka ukujiya acrylic idla ungangenisi amanzi enamathela
Acrylic esinemthombo Manzi
Ibitume Isekelwe esinemthombo Manzi
Ukudalulwa Acrylic esinemthombo Manzi
Nezimo Polymer-Cement esinemthombo Manzi
Js esinemthombo Manzi
ababili Uphiko Polyurethane esinemthombo Manzi
ungangenisi amanzi esinemthombo
Single-Ply zophahla ulwelwesi , Acrylic esinemthombo Manzi, Polyurethane esinemthombo Ukuze Ukhonkolo , Water Base Polyurethane esinemthombo Manzi , TPO ulwelwesi Manzi, Nezimo Polymer-Cement esinemthombo Manzi ,
Nezimo Polymer-Cement esinemthombo Manzi , Polyurethane esinemthombo Ukuze Ukhonkolo , Single-Ply zophahla ulwelwesi , Acrylic esinemthombo Manzi, Water Base Polyurethane esinemthombo Manzi , TPO ulwelwesi Manzi,